Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambatomaro: Mitokona ny mpianatra fa tsy misy rano sy kabone
Ambatomaro: Mitokona ny mpianatra fa tsy misy rano sy kabone
Efa ho telo andro izao no nitokona ny mpianatra ny oniversite monina eny Ambatomaro. Nosakan’izy ireo indray ny làlana teny Ambatomaro omaly tolakandro nanomboka tamin’ny 4 ora. Tohana tamin’ny vato sy hazo no nentin’izy ireo hanambara ny fitokonan’izy ireo.
Voalazan’ireto mpianatra ireto fa tsy mihaino azy ireo ny filohan’ny oniversite sy ny filohan’ny “Croua” izay mikarakara ny trano fonenana. Sady miavonavona no tsy miraharaha ny mpianatra ireo olona ireo, hoy ihany ny filazan’ireto mpianatra nitokona ireto. Tsy vitan’izany fa sady mivarotra ny fananan’ny oniversite koa. Namidin’izy ireo ny tany eny amin’ity toeram-ponenana ity hoy ihany ireto mpianatra ireto.
Isan’ny tena zava-doza koa hoy izy ireo ny tsy fisian’ny rano ao amin’ny toerana onenan’izy ireo. Toa izany koa ny toerana fivoahana na ny kabone izay mitarika loto sy fofona maimbo manerana ny tanàna. Asa na mba manana fahalalana amin’ny filan’ny vehivavy rano ireo mpitondra ireo, hoy ihany ireo mpianatra vehivavy mipetraka amin’ity toerana ity. Tian’ireo olona ireo ny hisian’ny valan’aretina sy ny hahafaty ny mpianatra eny an-toerana, hoy hatrany ny filazan’ireto mpianatra ireto.
Efa nisy moa ny filazana mahakasika ity raharaha ity izay nataon’ny mpianatra ireto volana vitsy lasa izay, nefa izao mbola nanaovan’ny filohan’ny Croua bemarenina izao ireto farany. Toa ny miteny an’efitra no fijery ireto mpianatra ireto fa tsy misy mpihaino sy tsy misy raiamandreny intsony.
Fifidianana filoham-pirenana: Tokony hisy ny fifanarahana pôlitika eo amin’ireo kandidà
Rajao: Tsy hilatsaka fa hanohana an’i Andry ?
Fifidianana filoha: Handray andraikitra ny Jeneraly Ravelinarivo Jean
Inty sy nday: Aiza ny mangaraharaha ?